Muqaalkaan daawo oo 2 daqiiqo ku fahan wixii Soomaaliya ka dhacay ee burburiyay. Conflict Management (Funny animated) | Arlaadi Online
Home Blog Muqaalkaan daawo oo 2 daqiiqo ku fahan wixii Soomaaliya ka dhacay ee burburiyay. Conflict Management (Funny animated)
Muqaalkaan daawo oo 2 daqiiqo ku fahan wixii Soomaaliya ka dhacay ee burburiyay. Conflict Management (Funny animated)
Axad May 07, 2017| Arlaadi Online
Tan iyo intii ay Soomaaliya xornimada qaadatay waa la isku Awood sheeganayay. Dowlad shacabkeeda u Awood sheegata, Jabhado isku Awood sheegta, Qabiilo xoog leh oo qabiilo kale u Awood sheegta, hadana Madaxda Maamul goboleedyada ayaa u Awood sheegta siyaasiyiinta kale ee degaankooda.
Waxaa la diiday in Dowladnimada la wadaago qoloadii timaadaba waxay diidaan inay dowladnimada baahiyaan oo waxay talada dalka kusoo koobaan koox yar sida Ala sheekh, Damuljadiid iyo kuwo kale.
Gobolada dalkuna waa sidaa oo kale, sida Aad muqaalkaan ka aragtaan waxay dideen in jidka la wadaago sida ay siyaasiyiinta Soomaalida mar walba u diidaan in talada dalka wax lagu darsado taaso ugu danbeynta ku keenta inay fashilmaan oo guul dareysteen.
Waxbadan u ekaa xaalada Soomaaliya markii buundada lala jaray ayey hab isa siiyeen. Labadii ka yaraa yaa la yimid caqli ay dariiqa ku wadaagaan. Waxaan soo xusuustay hees ay ku luuqayso fanaannada caanka ah ee Hibo Nuura
“Caqligii wanaagsani. Itaal inuu ka roon yahay. Bal eegoo u fiirsada” Hibo Nuura
Halkaan ka daawo oo u fiirso ka dibna ka fakir xaalada Soomaaliya